भदौ १, २०७६ | राधेश्याम अधिकारी
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा यतिवेला शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक माथि छलफल हुँदैछ । सरकारले यो विधेयक ल्याउनु पछाडिको कारण; विश्वविद्यालय सम्बन्धी अन्य ऐनमा भएका केही व्यवस्थामा एकरूपता कायम गराउनु परेको र छात्रवृत्तिको विषयमा संविधान सादृश्य बनाउनु परेको बताएको छ ।
विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनमा एकरूपता ल्याउन यो विधेयकमा मूलतः तीन वटा विषयवस्तु समेटिएका छन् । पहिलो, विश्वविद्यालय सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने काम सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने । दोस्रो; सहकुलपति अर्थात् शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई जुनसुकै विषयमा पनि ‘निर्देशन दिने’ व्यवस्था राख्नुपर्ने र; तेस्रो, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू (जसमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगका पदाधिकारी पर्दछन्) लाई नियुक्तिको समयावधि बाँकी छँदै हटाउन परेमा त्यसको व्यवस्था गर्ने उपाय पनि विधेयकमा सुझाइएको छ ।
विश्वविद्यालय सम्बन्धी यी प्रश्नमा प्रवेश गर्नुअघि सैद्धान्तिक रूपमा केही विश्लेषण हुनु जरूरी छ । यो विधेयकले तीन वटा मान्यतालाई एकसाथ भत्काएको छ– पहिलो; विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिएको स्वायत्ततामाथि यसले सीधै प्रहार गरेको छ । दोस्रो, विश्वविद्यालयहरूमध्ये केन्द्रीय विश्वविद्यालय मात्र संघद्वारा संचालित हुने कुरा संविधानको अनुसूची–५ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । हाल रहेका विश्वविद्यालयको वर्गीकरण अहिलेसम्म गरिएको छैन । तेस्रो, स्वयं शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (जसलाई अझै सार्वजनिक गरिएको छैन) बमोजिम शिक्षा ऐनको छिट्टै अर्को विधेयक ल्याउने शिक्षामन्त्रीको प्रतिबद्धताका बाबजूद यो विधेयकमाथि छलफल गराउनुको औचित्य बाँकी रहन्न ।
माथि उठाइएका पहिलो र दोस्रो प्रश्नलाई एकसाथ राखेर हेरौं: विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई प्रचलित सबै ऐनले स्वीकार गरेका छन् । कुलपति उपस्थित हुँदा कुलपतिले, कुलपतिको अनुपस्थितिमा सहकुलपतिले र सहकुलपति पनि अनुपस्थित हुँदा उपकुलपतिले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था अहिले रहेको छ । सभाको बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नै प्रमाणित गर्ने व्यवस्थाले कुलपतिको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको हकमा स्वयं प्रधानमन्त्री (कुलपति) ले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसनिम्ति काठमाडौंभित्र वा बाहिर रहेका सबै विश्वविद्यालय सभाको बैठकका निर्णय बोकेर सिंहदरबार धाउनुपर्ने भयो । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका बाबजूद प्रधानमन्त्रीले सबै निर्णय रुजु गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो । शिक्षामन्त्रीको सन्दर्भमा पनि यही कुरो लागू हुन्छ । सभाका निर्णयहरू जतिञ्जेल प्रमाणित हुँदैनन्– त्यतिञ्जेल सभाका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन ।
यसको अर्को पहलु पनि छ । सभाका प्रत्येक निर्णयको जिम्मेवारी प्रमाणित गर्ने व्यक्तिले नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति, सहकुलपति बनाउनु पछाडिको तात्पर्य विश्वविद्यालयको दैनिक काम कारबाहीमा संलग्न गराउनका निम्ति होइन । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय (सभा) मा उनीहरूको उपस्थिति आलङ्कारिक (Ceremonial) हो । उनीहरूले केही निर्देशन दिने हो भने सभामा दिन सक्छन्; किनभने त्यहाँ उनीहरूको उपस्थितिलाई कानूनले स्वीकार गरेको हुन्छ ।
त्यसैगरी, शिक्षामन्त्रीले जे कुरामा पनि, जहिले पनि विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन पाउने अधिकार थप्न खोजिएको छ । तर यसले शिक्षामन्त्रीलाई विश्वविद्यालय बनाउने होइन, गिजोल्ने, खेल्ने अवसर दिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको गुञ्जाइस एकदमै बढ्छ । शिक्षालाई अनपेक्षित राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने सोच अघि बढाउनुपर्ने वेलामा शक्तिको केन्द्रीकरण गरी थप हस्तक्षेप निम्त्याउने यस्तो व्यवस्था कदापि स्वीकार्य हुन सक्तैन । बरु यसअघि जुन जुन विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनमा यो व्यवस्था राखिएको छ त्यहाँबाट पनि हटाउने गरी संशोधन ल्याउनु आवश्यक छ । आउँदा दिनमा शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनालय भन्दा पनि तलको अवस्थामा पुर्‍याउने गरी हुन लागेको यो संशोधनबारे समयमै खबरदारी गरिनु आवश्यक छ ।
यस्तो विधेयक ल्याइरहँदा राजनीतिक नेतृत्वले ख्याल नगरेको अर्को कुरो– जुन विश्वविद्यालयमा निर्देशन दिने लगायतका अधिकार यसअघि राखिएका थिए– के शिक्षामन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण तिनको हालत राम्रो हुनसकेको एउटा पनि उदाहरण छ ? छैन भने एकरूपता ल्याउने नाममा यो पहल किन जरूरी भयो ?
जहाँसम्म विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउने नयाँ व्यवस्था सुझइएको छ– त्यसमा सिद्धान्ततः विरोध गर्नुपर्ने देखिन्न । तर सभा (सिनेट) का २५ प्रतिशतले पदाधिकारी हटाउन अनुरोध गरेमा कुलपतिले छानबिन गराउने कुरा उचित छैन । कम्तीमा यो संख्या ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने र छानबिन पश्चात सभाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले हटाउन सक्ने व्यवस्थाको साटो दुईतिहाइ हुनुपर्ने गर्नु जरूरी छ । किनभने सभाको बनोट हेर्दा त्यहाँ सरकारको उपस्थिति ठूलो संख्यामा छ ।
खासमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष– विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा हो । योग्य र राम्रा मानिसको छनोट गर्न सके हटाउने प्रावधान नै आवश्यक पर्ने थिएन । राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाका आधारमा अयोग्य र बेइमानलाई संस्था जिम्मा लगाएर राम्रो प्रतिफलको आश गर्नु परस्पर विरोधाभासयुक्त कुरा हुन् ।
सबैलाई थाहा छ– शिक्षाको पहुँचलाई संविधानले मौलिक हकमा व्यवस्थित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ भने आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने ग्यारेण्टी गरेको छ । अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने व्यवस्था छ । दलितको हकमा संविधानमा ‘दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ र प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ’ भनिएको छ । त्यसैगरी सामाजिक न्यायको हकभित्र– ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई ... शिक्षामा ... कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ’ भनी उल्लिखित छ ।
तर छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐनमा संशोधन ल्याइरहँदा संविधानका यी व्यवस्थाको अलिकति पनि ख्याल गरिएको देखिंदैन । उदाहरणका लागि विधेयकमा दलितलाई छात्रवृत्ति पाउन ‘विपन्न हुनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । के संविधानले यस्तै व्यवस्था गरेको हो ?
अब आएर, सांसद/मन्त्री सबैलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धमा यो विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको व्यवस्था संविधान अनुकूल छैन भन्ने हेक्का भएको हुनुपर्छ । तथापि, संविधान अनुकूल बनाउन आवश्यक गृहकार्य गरेको देखिन्न । यो सम्बन्धमा सरकारले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग परामर्श गरी छुट्टै विधेयक ल्याउनु जरूरी छ । छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई मात्र पछि ल्याउने गरी बाँकी विधेयक अघि बढाउँदा राजनीतिक, सामाजिक कोणबाट सरकारमाथि गम्भीर आरोप लाग्न सक्छ ।
माथि उल्लिखित सबै कुरामा विचार पुर्‍याई निकट भविष्यमा छुट्टै शिक्षा विधेयक ल्याउनै छ भने यो विधेयक पारित गराउन सरकारले कम्मर कस्नुको अर्थ छैन । शिक्षामन्त्रीले भन्नु पनि भएको छ– उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम छुट्टै शिक्षा सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी छ । संसदमा पेश भइसकेको विधेयक भएको र शिक्षामन्त्रीको शब्दमा ‘अन्य कानून सरह एकरूपता कायम गर्नसम्म अगाडि बढाइएको’ भनिए पनि यो विधेयक पारित गर्न सोचे जस्तो सजिलो पनि छैन ।
ग) सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझवलाई महत्वका साथ ग्रहण गर्ने ।
घ) शिक्षाको विषय भएकोले प्रतिपक्ष लगायत अन्य दलको विश्वास लिने ।
तर; के सरकार यी न्यूनतम सुझव ग्रहण गर्न तयार छ ?